Sida loo badalo files AVCHD in qaab ProRes
AVCHD waa qaab video Sare Qeexid si wada jir ah loo naqshadeeyey loona sameeyey shirkadaha Panasonic iyo Sony. Kaamirada AVCHD qabsadaan qaabab kala duwan oo ku salaysan warbaahinta oo ay ku jiraan xusuusta flash, cajaladaha adag iyo 80 DVD mm. AVCHD waa mid ka mid ah qaabab ugu badan ee loo fiidiyo oo cadaadin karo lana imaan karo videos tayo sare leh. Haddii aad doonayso in aad xaalkaa files leh qaabab AVCHD in FCP, kaa horimanayaa la caqabado badan. Waxaad u baahan tahay si loogu badalo qaab AVCHD in qaab ProRes. Halkan waxaan ku talinaynaa saddex converters aad kala dooran karto, desktop, oo lacag la'aan ah oo online.
Qeybta 1: Best AVCHD in ProRes Converter
Qeybta 2: AVCHD Free in ProRes Converter
Qeybta 3: AVCHD Online in ProRes Converter
First yimaado Wondershare Video Converter Ultimate for Mac . Tani waa tallaabo ay hage user talaabo kaa caawinaya in aad fahamto sida loo isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate for Mac si loogu badalo Videos AVCHD in qaab ProRes.
Talaabada 1: Marka hore, download Wondershare Video Converter Ultimate for Mac ka dibna ku xidh. Waxaad isku dayi kartaa waa lacag la'aan.
Talaabada 2: Daahfurka Wondershare Video Converter Ultimate for Mac ka dibna furaysto in aad qalab video duubo (fiidiyo). Sug qaar ka mid ah waqtigii qalab aad in la ogaado. Ku dar files AVCHD in aad qabtay isticmaalaya fiidiyo ah in Wondershare Video Converter Ultimate for Mac ah. Hab kale oo ay ku darto files AVCHD waa in jiidi-n-hoos u faylasha gal software ah.
Tallaabada 3: Marka files AVCHD waxaa uploaded gal software this, dooran file in aad rabto ama sii wado si 'Dooro All' doorasho. Ka dib markii in, ku dhufo oo kaliya fursad u 'Load'. Riix qaab icon si ay u muujiyaan guddiga wax soo saarka. Markaas, dooro "ayeey" fursad u doortaan qaab aad u jeclaystay. Dooro qaab ProRes sida (wax soo saarka) qaab finalka
Talaabada 4: Ku bilow diinta files AVCHD in ProRes. Marka marxaladdan, waxaad bedeli kartaa waddada wax soo saarka ama magaca saarka ah ee video final. Tallaabada xigta waa in guji badhanka 'badalo' si aad u bilowdo file AVCHD in ay diinta ka ProRes. Marka dhan laga badalay file la dhamaystiro, ogeysiis pop-up a tusi doonaa shaashadda. Riix ikhtiyaarka "Open Folder", si aad u hesho meesha aad file gediyay.
Tani waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan video qalab Converter oo awood u isticmaala inay si fudud oo dhaqso beddelid qaab video inuu ciyaaro qalab kasta oo macruufka kasta. Waa aalad dambeeyay technology u saamaxaya kuwa isticmaala Mac inaad kala soo baxdo iyo badalo videos ka YouTube in iPad, iPhone, Apple TV iyo iPod gabi ahaanba bilaash ah. Si Converter qaab video adiga oo isticmaalaya Wondershare Free Video Converter u Mac , kaliya aad u raacaan saddex tallaabo oo fudud. Tallaabada ugu horreysa waa in ay si toos ah jiidi aad video files galay qalab this. Tallaabada labaad waa in ay doortaan qaab wax soo saarka ah ee doorashada. Tallaabada ugu dambaysaa waxay tahay inaad riix "Beddelaan" button aad u bilowdo nidaamka video qaab beddelidda. Iyadoo qalab this, waxaad ka daawan kartaa oo keliya ma aha content digital internet-ka, laakiin sidoo kale ku raaxaysan YouTube videos offline meel kasta, waqti kasta iyo iyada oo aan lacag la qarashgareeyo kasta.
Halkan waxa kale oo waa ka duwan online in aad isku dayi kartaa. Just iska baarto.
> Resource > Beddelaan > Sida loo rogo ama faylasha AVCHD in ProRes Qaabka